Shiinaha OEM Isku-dhafka Isku-dhafka Korantada ee Sanduuqa Nooca Korontada oo leh Soosaarayaasha Qiimaha-shengte iyo alaab-qeybiyeyaal |Shengte
Kala beddelka OEM Isku-dhafka ah ee Sanduuqa Korontada Nooca Beddelka leh Qiimaha Warshadda-shengte
Transformer-ka la isku daray (oo sidoo kale loo yaqaan Transformer Boxer American), oo ah unugga tamarta muhiimka ah ee shabakadda qaybinta fiilooyinka, waxay gelinaysaa furaha culeyska sare ee korantada iyo fiyuuska-sare ee sanduuqa beddelka.
Qaab dhismeedka buuxa ayaa lagu qaataa haanta.Saliidda Transformer ee taangiga waxay leedahay dahaar wanaagsan iyo waxqabadka kulaylka.
Waxay leedahay faa'iidooyinka cabbirka yar yar, miisaanka fudud, rakibidda iyo dayactirka habboon, badbaadada iyo kalsoonida, muuqaalka quruxda badan iyo wixii la mid ah.
Si weyn looga isticmaalo magaalooyinka, meelaha la dego, hoteellada, isbitaallada, warshadaha iyo macdanta, saldhigyada saliidda, garoomada diyaaradaha, jidadka tareenada, biyaha badda iyo meelaha kale ee korontada laga dhaliyo.
J: Qaab dhismeedka substation-ku waa qaabaynta "isha" ama "product".
B. Qalabka qolofka ee alaabtu waa saxan aluminium aluminium ah, saxan bir ah, saxan isku dhafan, fiber galaas oo la xoojiyay saxanka sibidhka, iwm.
C. Saldhigga saldhiggu wuxuu ka samaysan yahay birta kanaalka galvanized ama sibidhka oo leh iska caabin daxaleed oo xoog leh iyo xoog farsamo oo ku filan.
D. Daboolka sare ee sanduuqa sanduuqa wuxuu qaataa qaab-dhismeed laba-lakab ah, kaas oo leh kuleylka kuleylka wanaagsan, ilaalinta shucaaca iyo saameynta hawo-qaadista.
E. Qol kasta oo substation ah waxaa lagu kala saaraa saxan bir ah, qol kastana waxaa lagu qalabeeyaa qalab nalaleed.G ee ugu sarreeya ee transformer-ku waxa uu ku qalabaysan yahay qiiqa qiiqa oo toos ah si loo hagaajiyo.
Beddelka Isku-dhafka ah (Transformer Box American)
Qaabka Awoodda la qiimeeyay (KVA) Kala duwanaanshaha taabsiinta isku dhafka korantada Nambarka kooxda isku xirka Khasaar la'aan (w) Lumista (W) Hadda wax rarar la'aan ah (%) Cidhiidhiga wareegga gaaban (%) Cabbirka dulucda
Korantada Sare (KV) Baaxadda qaybinta (%) Korantada Hoose (KV) Dhererka * ballac * dhererka (mm)
ZGS11-1600 1600 1640kii 14500 0.8 2100x1885x2135
Fiiro gaar ah: Qaabka badeecada, cabbirka iyo miisaanka waa xog wakhti go'an, oo laga yaabo inay isbedelaan sababtoo ah hagaajinta naqshadeynta.
Hore: Qalabka Korantada ee Tayada Sare leh
Xiga: Qiimaha ugu Fiican DFW-12 Cable Branch Box Supplier-shengte
Qayb Koronto ah oo Tayo Sare leh